1993 – Year – Channel Myanmar
Groundhog Day (1993) Groundhog Day (1993) ~ IMDb - 8/10, RT - 97%, Meta - 72% ~Groundhog Day လို့‌ခေါ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်နေ့ဟာ မြောက်အမေရိကရဲ့ ပွဲတော်နေ့တစ်ခုပါပဲ။ Punxsutawney မြို့မှာ Punxsutawney Phil လို့ခေါ်တဲ့ ဂရောင်းဟော့လေး‌က နွေဦးပဲစောစော‌လာမလား ဆောင်းပဲရှည်မလား ဟောတာကို ကြည့်ပြီး ပါတီတွေပေးကြတဲ့နေ့ပေါ့။ အဲဒီနေ့မှာ နေရာအနှံ့က သတင်း‌သမားတွေ တီဗီအစီအစဉ် ကြေညာသူတွေ Punxsutawney ကို လာရောက်ကြတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အဲဒီ Groundhog Day မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့။ တော်တော်လေးစောတဲ့ Time Loop ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သလို သူ့ဟန်ကို Theme အဖြစ်မှီးပြီး နောက်ပိုင်းသုံးလာကြတာတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ Supernatural ထဲလည်း မှီးသုံးခဲ့ဖူးတယ်။ Groundhog Day ဟာ ...
Baazigar (1993) ရှရွတ်ခန်းကို ပေါက်သွားစေခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားက မင်းသမီးကာဂျိုးနဲ့ရှရွတ်ခန်းတို့ ပထမဆုံးတွဲရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါ...နောက်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Shilpa Shetty အတွက်လဲ ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့ပြီး သူ့ကို Baazigar မင်းသမီးလို့ ပြောစမှတ်တွင်ရလောက်အောင် ဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကား ပုံစံလေးကတော့...ရှာရွတ်ခန်း ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ မိခင်ကြီးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့အချိန်ကနေ စပါတယ်...သူ့ဘဝဟာ ဆိုးလွန်းပါတယ်...ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သူများအိမ်မှာ တောက်တိုမယ်ရ အလုပ်တွေလုပ်...မိခင်ကြီးကို ဆေးဝယ်တိုက်စားစရာတွေ ဝယ်ကျွေးပြီး သူကျတော့ အငတ်ခံနေတတ်တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ပါ...သူတို့ မိသားစု ဘဝကိုပြန်တွေးကြည့်ရင် ရင်နာစရာ အတိပါပဲ..ရှရွတ်ခန်းတို့မိသားစုဟာ အရင်တုန်းက ပြီးပြည့်စုံ ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုလေးပါ..ရှရွတ်ခန်း အဖေ နဲ့ အမေ ဟာ ကြင်နာသနားတတ်သူ သူတစ်ပါးကို ယုံပေးတတ်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်သမား တစ်ဦးရဲ့ကောက်ကျစ်မှုနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူလဲ သေဆုံးခဲ့သလို ပိုင်ဆိုင်သမျှ အကုန်လုံးလဲ ပေးအပ်လိုက်ရပြီး လမ်းဘေးကို ရောက်ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်..အမေဖြစ်သူခမျာမှာလဲ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ သေဆုံးသွားတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ အိပ်ရာထဲ ...
The Eagle Shooting Heroes (1993) Eagle Shooting Heroes (1993)IMDb Rating - 7.1“ သိမ်းငှက်သူရဲကောင်းများ ”Eagle Shooting Heroes ဆိုတဲ့နာမည်က မြန်မာသိုင်းရုပ်ရှင် ပရိတ်သတ်တွေအတော်များများ ရင်းနှီးပြီးသား နာမည်ပါပဲ။ သိုင်းလောကစိန်ခေါ်သံ၊ တိမ်လွှာနဂါးသူရဲကောင်းများ၊ မက်မွန်မြေက ချစ်တေးတစ်ပုဒ်၊သိမ်းငှက်သူရဲကောင်း၊ နဂါးနိုင်ဓား စတဲ့ ကျင်းယုံရဲ့သိုင်းယူနီဗာ့စ်ကြီးကို လူအတော်များများ သဘောကျကြပါတယ်။ သူရဲ့တခြားသိုင်း၀တ္တုတွေကို ရိုက်ကြတဲ့ဟာတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ သွေးသစ္စာဓား၊ နှင်းတောင်သူရဲကောင်း၊ ပြန်လမ်းမဲ့ကျွန်းတို့ပေါ့။ 2000 ခုနှစ်၀န်းကျင်မှာ ကိုးနာရီမြ၀တီကားတွေ သိုင်းခွေတွေနဲ့ ကြီးလာတဲ့သူတွေကတော့ သိမ်းငှက်သူရဲကောင်း (ပထမတွဲ) ဝါ မက်မွန်မြေက ချစ်တေးတစ်ပုဒ်ထဲက သိုင်းလောကထွဋ်ခေါင်‌လေးယောက်နဲ့ ၀မ်ချုံရဲတို့ကို ကောင်းကောင်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လောက်မှာပါ။ အခုထိလည်း အခါခါ Reboot ခံနေရတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။အနောက်ပိုင်းအဆိပ်ဘုရင် အိုးရန်ဖုံး၊ အရှေ့ပိုင်းတိတ္ထိ မက်မွန်ကျွန်းသခင်ဟွမ်၊ မြောက်ပိုင်းသူဖုန်းစားဂိုဏ်းချုပ် ဟုန်ချီကုန်း၊ တောင်ပိုင်းဧကရာဇ် တွမ့်၀မ်ရယ်၊ အလယ်ပိုင်းသူတောင်စင် ၀မ်ချုံရဲစတဲ့ ကောကျင့် ...
Farewell My Concubine (1993) Farewell My Concubine (1993) "မောင်းမငယ် နေလေရစ်"1993ဩဂုတ်မှာ နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာထဲ " တရုတ်က သူ့‌မြေကရုပ်ရှင်ကို သူ့ဘာသာ ပြန်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီး ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတော့ အဲဒီရုပ်ရှင်ကို အမြင့်ဆုံးဆု ပေးလိုက်တယ်"ဆိုတဲ့ ‌ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါခဲ့တယ်။ အဲဒီရုပ်ရှင်ဟာ 46ကြိမ်မြောက် ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ Palme d'Or ရခဲ့တဲ့ Farewell My Concubine ပါပဲ။ဇာတ်လမ်းရဲ့ဦးအစဟာ ၁၉၂၄။၁၉၁၂မှာ ပုရီကို နန်းချပြီးနောက်ပိုင်း ဘုရင်ခေတ်ကနေ သမ္မတနိုင်ငံခေတ်ကိုကူးတဲ့ မတည်မငြိမ်ကာလတွေ ထဲမှာပေါ့။တရုတ်ပြည်မှာ အဲဒီနောက်ပိုင်းကာလတွေဟာ အပျက်ပျက် ကာလတွေချည်းပါပဲ။ ၁၉၁၆ကနေ ၁၉၂၈အတွင်းဖြစ်တဲ့ ငတ်မွတ်သေကြေမှုများခဲ့တဲ့ စစ်နယ်ရှင်ကာလအတွင်းက ခုနှစ်တစ်ခု။ အဲဒီကာလမှာ ပခြုပ်သည်မတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ လူမမယ်သားကို ပေကျင်းအော်ပရာ လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတစ်ခုကို လာရောင်းခဲ့တယ်။ သူရောင်းခဲ့တဲ့ကလေးက လတ်စလီချောင်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ပဲစေ့လေး ခေါ် တျဲ့ရီ ။ ပေကျင်းအော်ပရာရော ခေတ်ပျက်တွေရောက ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ သက်မဲ့ဇာတ်ဆောင်တွေဆိုတော့ ...
Fight Back to School3(1993) စတီဖင်ချောင်ရဲ့ ဒီဇာတ်ကားကတော့ IMDb Rating (6.2) ထိရရှိထားတဲ့ Action/Comedy အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားက Fight Back to School (1) နဲ့ (2) ဇာတ်ကားတို့ရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယကားမှာတော့ စတီဖင်ချောင်တစ်ယောက် ရာထူးပြန်ရပြီးနောက် လျို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအလုပ်ကို ပြန်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အလွဲတို့ထုံးစံအတိုင်း လူသတ်မှုတစ်ခုထဲက အသတ်ခံရသူဟာ စတီဖင်ချောင်နဲ့ ကံဆိုးစွာရုပ်ချင်းတူနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာပဲ ရဲဌာကနေ သေဆုံးသူနေရာကနေ ဟန်ဆောင်ပြီး လူသတ်သမားကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ စတီတင်ချောင်ကို စေခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ အသတ်ခံရသူနေရာကနေ ဟန်ဆောင်ပြီး ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ လူသတ်မှုကိုဖော်ထုတ်ရင်း စတီဖင်ချောင်တစ်ယောက် ဘာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ...။+++++++++++++++++ကျွန်တော့် Idol ကြီး စတီဖင်ချောင်ရဲ့ ဇာတ်ကားအကုန်လုံးကို 1080p BluRay Quality နဲ့တတ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်စုစည်းတင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြီးသမျှကို https://channelmyanmar.org/category/stephen-chow/ မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ File size…(2 GB) and (1.1 GB) Quality….BluRay 1080p 5.1CH and 720p Format…mkv Duration….01:29:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Lyric Lynn ...
The Crush (1993) The crush (1993) ====================== CMပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ၁၉၉၃ခုနှစ်က ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ Crushဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးပါရစေ... လူတိုင်း ဘဝမှာ တခါတော့ ကိုယ်သိပ်သဘောကျရတဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တော့ ရှိခဲ့ဖူးမှာပါ ဒါမှမဟုတ် ရှိလာမှာပါ. ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာလဲ ၁၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူသိပ် သဘောကျရတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်ပြီး သူ့အချစ်ကိုရအောင် ကြိုးစားထားတာကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာပါ. ဇာတ်လမ်းဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ အချစ်ကားတစ်ကားတော့ မဟုတ်ပါဘူး. အပျိုဖော်ဝင်စ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ယောကျာ်းပျိုတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်သဘောကျခြင်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးစားမှုတွေ အစွန်းရောက်သွားပုံကို ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားဖွယ် ကြည့်ရှူရမယ့် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ.ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အစမှာတော့ နစ်ကိုးလတ်အယ်လီယက်ဆိုတဲ့ သတင်းထောက်ဟာ အခုမှမြို့ကိုပြောင်းလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြို့မှာနေဖို့ အိမ်တစ်အိမ် ငှါးလိုက်ပါတယ် အိမ်ပိုင်ရှင်မှာ ၁၄ နှစ်အရွယ် အေဒရီယန်ဖော်ရက်စတာဆိုတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် ဖြစ်ချင်တော့ အေဒရီယန်က နစ်ကို စိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့ နစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစားပါတော့တယ် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် Translated by : Fiona Rose Encoded by : YK Quality : ...
The Mad Monk (1993) The Mad Monk (1993)IMDB(6.2)+++++++++++++++++ကျွန်တော့် Idol ကြီး စတီဖင်ချောင်ရဲ့ ဇာတ်ကားအကုန်လုံးကို 1080p BluRay Quality နဲ့တတ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်စုစည်းတင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြီးသမျှကို https://channelmyanmar.org/category/stephen-chow/ မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။စတီဖင်ချောင်ဆိုတာနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရော ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းပိုင်းမှာပါသူမတူအောင် တင်ဆက်နိုင်တဲ့ Comedy King တစ်ယောက်လို့ တန်းမြင်ကြမှာပါပဲ…ဟာသကားတွေပေါပါတယ်…ဒါပေမယ့် အနုပညာအရ တန်းဝင်ဖို့သိပ်ခက်ခဲတယ်…စတီဖင်ချောင်ဇာတ်ကားတွေကတော့ အနုပညာအရရော ဟာသသဘောမှာရော သရော်တဲ့သဘောမှာရောသာမန်ဟာသကားတွေထက် တဆင့်မြင့်နေခဲ့တာပါ။ ရသတစ်ခုခုကို အမြဲပါဝင်လာအောင် ချပြထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲ သူ့ဇာတ်ကားတွေဟာ အာရှရဲ့ ထိပ်တန်းဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ကျန်နေခဲ့တာပါပဲ။စတီဖင်ချောင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ Theme တစ်ခုက ဘဝကို ပျော်ပျော်ကြီး ခံစားဖို့ပဲ…စိတ်ညစ်စရာတွေ့လဲ ပျော်ပျော်ကြီး…လုပ်သမျှရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ..ပြီး…လွဲတော့လဲ ပျော်ပျော်ကြီး…ဒါမျိုးဘဝမှာ နေဖို့က သိပ်ခက်ခဲတယ်မလား…ဘဝဆိုတာ ဖြတ်သန်းစဉ်က အတည်ကြီးတွေ ခံစား ချစ်ကြ မုန်းကြ လွမ်းကြ ဆွေးကြ တိုက်ကြ ခိုက်ကြ။ဒါပေမယ့် ပြန်တွေးကြည့်တော့လဲ ရယ်စရာအတိတ်တွေခပ်များများ။ဘဝဆိုတာ ဘာမှလဲမဟုတ်လှ။ဒီလိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ ဘဝကြီးကို ဟာသတွေနဲ့ ...
The Pelican Brief(1993) The Pelican Brief (1993) IMDB Rating -------- 6.6 ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ မူရင်းဝတ္တုဟာ The Firm တို့ A Time To Kill တို့ Rain Makerတို့လို နာမည်ကျော် Legal Thriller တွေပဲရေးခဲ့တဲ့ John Grisham ပါ။ သူရဲ့ ပထမဆုံးဝတ္တု A time to killဟာ၂၀၁၂အထိ စစ်တမ်းအရ ၂၇၅သန်းအထိ ကော်ပီရောင်းရပြီးပါပြီ။ ဒီနောက်ရေးတဲ့ The Firm ဟာ Best Seller စာရင်း ဝင်ခဲ့ပြီး သူ့ကို စအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ Legal Thrillerဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကပဲ CM မှာ တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူရဲ့ နာမည်ကျော်ဝတ္တုတစ်ပုဒ်ကိုပဲ Julia Roberts နဲ့ Denzel Washington တို့လို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Pelican Brief ဆိုတဲ့ ကားနဲ့ ထပ်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဗဟိုတရားရုံး ဂျူဒီ နှစ်ယောက်ကို ...
Philadelphia(1993) Philadelphia (1993) PG-13 | 125 min | Drama IMDB ----- 7.7 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Rotten Tomatoes ----- 79% ကာလအားဖြင့်တော့ ၁၉၉၀ ဝန်းကျင် AIDSအကြောင်း လူတွေ သိပ်မသိသေးတဲ့အချိန်မှာပါ။လူတွေဟာ သူတို့ နားမလည်တာကို ကြောက်ရွံ့ တက်ကြတယ်။ AIDSကို ရောဂါဆိုးကြီးလို့ပဲ သိပြီး ဂဃနဏ မသိကြသေးတဲ့အချိန်မှာ ဒီရောဂါသည်ကို ဘယ်လို ဆက်ဆံခဲ့ကြလဲ ပြသ သွားခဲ့တဲ့ ထိုခေတ် ထိုအခါက AIDS ပညာပေး ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ပါ။ဒီ ရုပ်ရှင်ဟာ ဟောလိဝုဒ် Mainstreamရဲ့ AlDS နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပထမဆုံး Big Budget ရုပ်ရှင်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ Goffrey Bowersဆိုတဲ့ ရှေ့နေ့တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို Inspiration လုပ်ထားတာမို့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ကျောရိုးယူပြီး တင်ပြထားတဲ့ ကားတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒီ အဖြစ်အပျက်ကလေးကတော့ Philadelphia ဆိုတဲ့ မြို့ကလေးက အရည်အချင်းရှိတဲ့ Andrew Beckett ဆိုတဲ့ စီနီယာရှေ့နေ တစ်ယောက်ဟာ ပေါ်ဦးစ AIDS ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အလုပ်အတွက်စိုးရိမ်လို့ ထုတ်မပြောခဲ့ပေမဲ့ သိပ်မကြာခင် နဖူးက ...
Only the Strong ( 1993 ) ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကျွန်တော်တို့ပါးစပ်ဖျားထက်မှာစွဲခဲ့တဲ့ပါရာနာဝေးလို့လူသိများခဲ့တဲ့ Only the strongဇာတ်ကားဟာဆိုရင် 1993 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပြီးIMDb rating 6.7အထိရရှိခဲ့တဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်...မင်းသားကြီး Mark Dacascos နဲ့ မင်းသမီးStacey Travis တို့အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားပြီးGeoffrey Lewis နဲ့ Paco Christian Prietoတို့အပြင် သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လူးဝစ်စတီဗင် (Mark Dacascos) ကသူ့ဒေသကနေ နှစ်အတော်ကြာခွဲခွာပြီးစစ်သားတစ်ယောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းနေရာကသူ့ဒေသ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်...သူတက်ခဲ့တဲ့လင်ကွန်အထက်တန်းကျောင်းကဆရာ့ဆီမှာအကူအညီတောင်းဖို့သွားရင်းကနေ သူ့ကျောင်းကကျောင်းသားတွေက ဆေးစွဲ အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုးသွမ်းပျက်စီးနေကြတာ တွေ့လိုက်ရတယ်...အဲ့ကျောင်းမှာ ဆရာပြန်လုပ်ဖြစ်ရာကကလေးတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်...Capoeira ဆိုတဲ့ ဘရာဇီးရိုးရာသိုင်းပညာနဲ့ကလေးတွေပျက်စီးမှုရဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဈေးကွက်ကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဆေးလ်ဗရီယို (Paco Christian Prieto) ကိုဘယ်လိုတွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတာ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...ဆရာတပည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်လို့နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်1993 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြည်လင်ဆုံးရနိုင်တဲ့ ကွာလတီကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်-------------------------------------------------------------ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀တုန္းကကြ်န္ေတာ္တို႕ပါးစပ္ဖ်ားထက္မွာစြဲခဲ႔တဲ႔ပါရာနာေဝးလို႔လူသိမ်ားခဲ့တဲ့ Only the strongဇာတ္ကားဟာဆိုရင္ 1993 ခုႏွစ္မွာထြက္႐ွိခဲ့တဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ၿပီးIMDb rating 6.7အထိရ႐ွိခဲ့တဲ့ကားပဲျဖစ္ပါတယ္...မင္းသားႀကီး Mark Dacascos နဲ႔ မင္းသမီးStacey Travis တို႔အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီးGeoffrey Lewis နဲ႔ Paco ...
What’s Eating Gilbert Grape (1993) * What's Eating Gilbert Grape *IMDB - 7.8/10 Rotten Toamtoes - 89% MKWah – 4.5/5____________ Leonardo DiCaprio နဲ့ Jonny Depp တို့ အတူ တွဲရိုက်တဲ့ ရှားရှားပါးပါး ရုပ်ရှင် . . ။အမေရိကန် မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝ တွေကို မြင်ရမယ့် ရုပ်ရှင် . . ။အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့် အချိုးအကွေ့တွေနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတစ်ပုဒ်ကို ခံစားရမယ့် ရုပ်ရှင် . . ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက အသက် 24 နှစ်အရွယ် Gilbert (Jonny Depp) ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သူ့မိသားစုအကြောင်း ပါ။ သူ့မှာ စိတ်မမှန်တဲ့ အူကြောင်ကြောင် ညီတစ်ယောက် (Leonardo) ရှိတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ...
The Nightmare Before Christmas (1993) ဒါကတော့ နာမည်ကြီး Dark Gothic movieတွေကိုဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့Tim Burtonကြီး produceလုပ်ထားတဲ့Stop-motion animated musicalအမျိုးအစားလေးပါ။Ratingအကြမ်းစားတွေရော၊ musicalကားဆိုတော့သီချင်းဆုတွေရော၊ Oscarဇကာတင်တွေရောရထားတဲ့တစ်ခေတ်တစ်ခါက ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပါ။ဇာတ်လမ်းကတော့ အဲ့ခေတ်ကာလမှာအားလပ်ရက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကို လုပ်ဆောင်ရတဲ့မြို့အသီးသီးရှိတယ်ပေါ့။အီစတာမြို့၊ ဟော်လိုဝင်းမြို့၊ခရစ်စမတ်မြို့ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ဒီကားရဲ့ဇာတ်လိုက်ကျော် ဂျက်က ဟော်လိုဝင်းမြို့ရဲ့ရွှေဖရုံသီးဘုရင်ပေါ့ခြောက်လှန့်တဲ့နေရာမှာအထင်ကရဖြစ်တဲ့ အရိုးခြောက်ပေါ့။အားလုံးကသူ့ကို အမြဲချီးမွမ်းနေပေမယ့်သူကတော့ ဟော်လိုဝင်းမှာ လိုက်ခြောက်လှန့်နေရတာကို စိတ်ကုန်နေပါပြီ။နောက်တော့ ခရစ်စမတ်မြို့ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာဟော်လိုဝင်းဘုရင်က ခရစ်စမတ်လုပ်မယ်လို့ကြံစည်ရင်းသူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ခရစ်စမတ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ပါအုံး။ File Size : ( 714 GB , 308 MB )Quality : WebRip 720pRunning Time : 1 hr ...
The Eight Immortals Restaurant: The Untold Story (1993) လူသားပေါက်စီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဟိုတုန်းကကားတွေတော်တော်များများကို ပြန်အမှတ်ရမိမှာပါ ဒီကားကတော့ မကာအိုပြည်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ Eight Immortal စားသောက်ဆိုင်က ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်ရိုက်ထားတာပါ ၁၉၈၅ မကာအိုပြည်က Eight Immortal ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးမှာ လူနှစ်ယောက် မာကျောက်ကစားရင်း အငြင်းအခုံထဖြစ်တယ် ၀မ်ချီးဟန်ဆိုတဲ့ သိပ်ကိုဖျံကျပြီး ကလိမ်ညာဏ်များတဲ့သူက မာ​ကျောက်ကစားတိုင်း တစ်ကွက်ခိုးခိုးပြီးဆော့တာ ဆိုင်ရှင် ချန်လမ်က​ကောင်းကောင်းသိတယ် ဒါကြောင့်လဲ ၀မ်ချီးဟန်နိုင်တိုင်း ပိုက်ဆံမပေးပဲ အကြွေးနဲ့လျှော်လျှော်ထားခဲ့တာ တကယ်တော့ ဆိုင်ရှင် ချန်လမ်ကပိုက်ဆံ တစ်ပြားတောင် ပေးချင်စိတ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒီငွေလေး အနည်းကျဥ်းလောက်အတွက်နဲ့ မကာအိုမှာဟိုးလေးတကျော်ဟော်လေးတစ်ကျိုးဖြစ်သွားစေ တဲ့ ထိပ်တန်းလူသတ်မှု တစ်နည်းအားဖြင့် လူသားပေါက်စီဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ case တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ဒီကားဟာ 1993 လောက်ကရိုက်တဲ့ကားပေမယ့်လို့ တကယ့်အဖြစ်ပျက်နဲ့အတော်လေးတူအောင် ရိုက် ယူထားနိုင်တာတွေ့တယ် နောက်ပြီး R-Rated အဆင့်ရှိ scene တော်တော်များများပါတဲ့အတွက် ကလေးသူငယ်တွေ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေမကြည့်ကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဖက်ခေတ်ကရိုက်တဲ့ကားပေမယ့် အသတ်အဖြတ်တွေ 21+ scene တွေ အော်ဂလီဆန်လောက်အောင်အများအပြားပါ၀င်တာမို့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုကားမျိုး reboot တောင်ပြန်မလုပ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းမိပါတယ် ဒီဖက်ခေတ်နည်းပညာတွေ မိတ်ကပ်အလန်းစားတွေ နဲ့ ရိုက်ရင်ဘယ်လောက်တောင်အော်ဂလီဆန်ရမလဲလို့ ကဲ အော်ဂလီလဲဆန်ရမယ် ရွံဖို့လဲကောင်းရမယ် တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်လဲဖြစ်တဲ့ကားကိုကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် တချို့တော်တော်များလဲ ကြည့်ပြီးလောက်ပြီထင်ပါတယ် Translated By : Hein Thet Naing Encoded By : XCode
Sommersby(1993) Sommersby(1993)အညႊန္း********************(zawgyi)ဂ်က္သည္ ၆ နွစ္ၾကာမွ် ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီးမွ ရြာသုိ႕ျပန္ေရာက္လာသည္....ေထာင္က်ေနသသျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူကေျပာျပသည္....သူ႕ဇနီးနွင့္ ကေလးျဖစ္သူက ဂ်က္ကုိ အံအားသင့္စြာျဖင့္ႀကဳိဆုိၾကသည္....ဂ်က္ကုိသေဘာက်သည္ျဖစ္ေစ သေဘာမက်သည္ျဖစ္ေစ တစ္ရြာလုံးကေတာ့ ၀ုိင္း၀န္းႀကဳိဆုိၾကသည္.... ဒီေနရာမွာ ဘာထူးထူးဆန္းလာလဲဆုိေတာ့ ဂ်က္ရွိစဥ္ကထဲက ေမြးထားတဲ့ေခြးက စိမ္းစိမ္းကားကား ထုိးေဟာင္ခဲ့တယ္...ၿပီးေတာ့ ဖိနပ္ဆုိင္မွာ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ေတာ့လည္း ဖိနပ္အတုိင္းကုိ မွတ္မိေနတဲ့ဆုိင္ရွင္က ဆုိက္ေသးသြားတယ္ေနာ္လုိ႕မွတ္ခ်က္ခ်ျပန္တယ္.... ဂ်က္ရွိစဥ္ကထဲက ေသဆုံးတဲ့သူတစ္ေယာက္ရွိတယ္..ဒါကုိလည္းစကားမွားၿပီးေျပာမိျပန္တယ္....သူဟာ ဂ်က္နဲ႕တေထေရာထဲတူတဲ့သူျဖစ္ေပမယ့္ ဂ်က္အတုလား အစစ္လား တကယ့္ကို ေ၀ခြဲရခက္ပါတယ္... ဒီကားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးဇာတ္ေၾကာင္းက ဒီေလာက္ပဲေျပာပါရေစ...အေတြးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ လွပေသာရုပ္ရွင္ေၾကာင့္ ခံစားမွႈသီးျခားကမၻာထဲကုိ ပုိ႕ေဆာင္ေပးတဲ့ကားမ်ဳိးမုိ႕ပါ... ဒီကားဟာ ရစ္ခ်က္ဂီယာနဲ႕ မင္းသမီးႀကီး ဂ်ဳိဒီေဖာ့္စ္စတာတုိ႕ အဓိကသရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္.. ရစ္ခ်က္ဂီယာလုိ႕ မသိၾကေပမယ့္ Pretty Woman ဇာတ္ကားနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာပရိတ္သတ္ေတြရင္းနွီးၾကမွာပါ...ဒီကားကုိၾကည့္ရင္ ဂ်က္ရဲဲ႕အျပဳအမူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံေတြ စကားေျပာပုံေတြကုိ အေသးစိတ္ဂရုစိုက္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္... ဂ်က္ဘာေၾကာင့္ဒီလုိလုပ္တာလဲ..ဘာျဖစ္လုိ႕ ဒီလုိလမ္းေတြကုိေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလဲ... ဇာတ္ကားၾကည့္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားတုိ႕ကုိ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာ ခ်န္ေပးခဲ့လိမ့္မယ္... ဂ်က္လုပ္တာမွန္ရဲ႕လား....ငါသာဆုိရင္ ဒီလမ္းကုိေရြးခ်ယ္နုိင္ပါ့မလား.... တျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုဆုိရင္ေရာ အဆင္ေျပနုိင္ပါ့မလား...ဆုိတာမ်ဳိးေတြေပါ့... ခံစားၾကည့္ၾကပါ....ခင္ဗ်ားတုိ႕ နွလုံးသားကုိ မဖမ္းစားနုိင္ဘူးဆုိရင္ ေသခ်ာတယ္ ခင္ဗ်ားတုိ႕နွလုံးသားဟာ ေက်ာက္သားေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားလုိ႕ပါပဲ....(unicode)ဂျက်သည် ၆ နှစ်ကြာမျှ ကွယ်ပျောက်ပြီးမှ ရွာသို့ပြန်ရောက်လာသည်....ထောင်ကျနေသသဖြင့် ပျောက်ကွယ်နေရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူကပြောပြသည်....သူ့ဇနီးနှင့် ...
The Fugitive (1993) ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်ရင်တော့ Old But Gold တွေထဲက တစ်ကားဖြစ်တဲ့ The Fugitive ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင်တော့ IMDb Rating- 7.8/10 ထိ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Harrison Ford နဲ့ Tommy lee Jones တို့လို မင်းသားကြီးတွေပါဝင်ထားတဲ့ Action , Crime , Drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပြီး ထို ၁၉၉၃ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ အခုထိ ကြည့်ရှု့လို့မရိုးနိုင်လောက်အောင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ခိုင်မာပြီး ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဖြင့်ပဲ မင်းသားကြီး Jones က Best Supporting Actor ဆုကို ရခဲ့တာဖြစ်သလို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ညွန်းရမယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းကိုတော့ Chicago မြို့မှာထင်ရှားတဲ့ အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန် Richard အကြောင်းကို အဓိကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Richard ဟာဆိုရင် သူ့မိန်းမ သေဆုံးမှု့မှာ တရားခံအဖြစ်ဆွဲချက်တင်ခံရပြီး သက်သေများက သူ့ဆီပဲ ဦးတည်နေတာကြောင့် တကယ်မသတ်ဘဲ သေဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက် Chicago မြို့ထဲမှ သူအပါအဝင်ဖြစ်သော ထောင်ကားဟာ lllINOISသို့ မောင်းနှင်လာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းတစ်ဝက်အရောက်မှာပဲ ထောင်သားတွေက ရုန်းရင်းဆန်ခက် ပြုလုပ်တာကြောင့် သူပါလာသော ထောင်ကားတိမ်းမှောက်ပြီး Richard ...
[18+] Green Snake ( 1993 ) 18+ အနည္းငယ္ပါလို႔ 18+ လို႕ ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ပါတယ္ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါImdb 7.1 ရရွိထားၿပီး 1993 ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ႔တဲ႔ဇာတ္ကားၿဖစ္ပါတယ္မင္းသမီးကေတာ႔ Chinese Ghost Story ထဲက နာမည္ၾကီးမင္းသမီးေလးလည္းပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ဇာတ္ၫြန္း_ေရွးေခတ္အလယ္ေလာက္ကလူနဲ႔မိစာၦခြဲျခားဖို႔ခက္ေနတ့ဲအခ်ိန္ကာလ.ဖာဟိုင္းဘုန္းႀကီးတစ္ပါးဟာမိစာၦေတြကိုနိွမ္ႏွင္းဖို႔အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကိုေျခဆန့္ေနခ့ဲတယ္.႐ႈပ္ေထြးမႈေတြၾကားထဲကအေနာက္အရပ္မွာတရားက်င့္ၾကံေနတ့ဲေႁမြႏွစ္ေကာင္(တစ္ေကာင္ကအျဖဴေရာင္ေနာက္တစ္ေကာင္ကအစိမ္းေရာင္)တို႔ဟာကယ္တင္ခြင့္ကိုရခ့ဲတယ္ေႁမြႏွစ္ေကာင္ကညီအမေတြျဖစ္ၾကတယ္ညီမႏွစ္ေယာက္ဟာတရားက်င့္ၾကံၿပီးလူေတြၾကားထဲလူအျဖစ္နဲ႔ေနထိုင္ခ့ဲတယ္ဒီလိုနဲ႔ေႁမြျဖဴမေလးက႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တ့ဲေက်ာင္းဆရာဟူရွင္းနဲ႔လက္ထပ္လိုက္တယ္ျဖစ္ခ်င္ေတာ့အစိမ္းေရာင္ေႁမြမေလးကဟူရွင္းကိုႏွစ္သက္သေဘာက်ေနခ့ဲတယ္ အဲ႔ေနာက္မွာေတာ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးနဲ႔ ဟူရွင္းနဲ႔ ေၿမြမေလး ၂ေကာင္နဲ႔ဘယ္လိုေတြဆက္ၿဖစ္ၾကမလဲဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္သာဆက္လက္ခံစားၾကည္႕ရွုပါေတာ႔ဒီဇာတ္ကားေလးကအခ်စ္အလြမ္းအေဆြးတိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ရသစံုေပးႏိုင္တဲ့ေမွာ္ဆန္ဇာတ္ကားေလးမို႔လက္မလြတ္ပဲဆက္ဆက္ၾကည့္႐ႈၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစေနာ္ Translated & Review By XiaoEncoded By LK
[18+] Green Snake ( 1993 )
A Perfect World(1993) A Perfect World(1993)IMDb....7.5,,,,Rotten...79%အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုမွာ လူႏွစ္ေယာက္ေထာင္ေဖာက္ေျပးဖုိ႕ ႀကဳိးစားၾကသည္....သူတုိ႕ၾကည့္ရတာေျပးဖုိ႕အတြက္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာျပင္ဆင္ ခဲ့ပုံရတယ္... အလြယ္တစ္ကူလြတ္ေျမာက္သြားတယ္..... ဒီရာဇ၀တ္သား(၂)ေယာက္ဟာ ေထာင္ကထြက္ေျပးၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ဓားစာခံအျဖစ္ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ကုိပါေခၚသြားခဲ့တယ္... ေထာင္ေျပး(၂)ေယာက္ဟာ အရင္တုန္းက ဘယ္ေလာက္ဆုိးသြမ္းခဲ့လုိ႕ ေထာင္က်ခဲ့တယ္မသိေပမယ့္ ထြက္ေျပးစဥ္လုပ္ပုံကုိင္ပုံေတြၾကည့္ရတာ တစ္ေယာက္က ေသြးေအးဥာဏ္ေကာင္းစြာနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ျပသနာေတြကုိ ေျဖရွင္းေနၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေသနတ္တစ္ယမ္းယမ္းနဲ႕ ဦးေဏွာက္မဲ့အဆင္ျခင္မဲ့ လုပ္ကုိင္ေနတယ္.... သူတုိ႕(၂)ေယာက္လြတ္သြားေတာ့ ရဲဌာနတစ္ခုလုံးလည္း တုိင္ပတ္ေနသလုိ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ ရွိသမွ်ဌာနစုံက ဖမ္းဆီးဖုိ႕ႀကဳိးစားေနၾကတယ္....ဒီကားကေတာ့ ဒါရုိက္တာႀကီး Clint Eastwood ရုိက္ကူးထားၿပီး သူကုိယ္တုိင္လည္း ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ ထားသလုိ မင္းသားႀကီး Kevin Costner က ေထာင္ေျပးတစ္ေယာက္အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ထားတယ္... ဒီကားက ဇာတ္လမ္းအစမွ အဆုံးထိစိတ္၀င္စားဖုိ႕ေကာင္းသလုိ ထြက္ေျပးစဥ္ကာလတစ္ေလ်ာက္လုံး ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ဆက္ဆံေရးကုိေတြ႕ရလိမ့္မယ္.... ေလာကႀကီးထဲ ခုမွစ၀င္တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ကားေမာင္းထြက္ေျပးရင္းနဲ႕ စီးကရက္ရႈိက္လုိက္ မၿပဳံးမရယ္နဲ႕ ေျပာရင္းသင္ႀကားေနတဲ့ ေထာင္ေျပးသမားတစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အံအားသင့္စရာေတြ႕ရလိမ့္မယ္.... သူတုိ႕လြတ္ေျမာက္မလား ......ကေလးေလးကေရာ သူ႕အေပၚဘယ္လုိသေဘာထားလဲ... ခံစားၾကည့္လုိက္ပါဦး........ေသခ်ာတယ္ ဒီကားၾကည့္ၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႕သေဘာအက်ဆုံးကားေဟာင္းစာရင္းထဲမွာ ဒီကားပါသြားလိမ့္မယ္လုိ႕..... ဇာတ္လမ္းအညႊန္းနဲ႕ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Paing ပဲျဖစ္ပါတယ္.... File Size : (1 GB) and (380 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:18:00 Genre ...